Vaovao - Tsena Tungstène anio
Ny vidin'ny tungstène ao an-toerana dia nitohy nihena tamin'ity herinandro ity, indrindra noho ny fifandraisana ratsy eo amin'ny famatsiana tsena sy ny tinady, miaraka amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny valan'aretina maneran-tany, ny fitaterana, ny fepetra fitantanana ary ny liquidity, ka sarotra ny manao mazava tsara ny andrasana amin'ny tsena, ary ny ankapobeny. mahantra ny fihetseham-po amin'ny tsena , Nikorontana ny tolotra, ary tsy nisy ny fifampiresahana tamin'ny mpividy sy ny mpivarotra.
Ao amin'ny tsenan'ny tungstène concentrate dia nitombo ny rivotry ny fandefasana entana amin'ny ankapobeny, saingy eo ambanin'ny fanohanan'ny lafin-javatra toy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tsy fahampian'ny loharanon-karena, ny mpivarotra dia mbola mitandrina momba ny fivarotana fanontaniana ambany; Ny mpanjifa ambany dia tsy dia entanina hiditra amin'ny tsena handray entana, ary ny fangatahana ankapobeny dia navoaka. Ny famatsiana sy ny fangatahana amin'ny tsena dia efa teo amin'ny sehatry ny lalao nandritra ny fotoana ela, ny varotra spot dia manify, ary ny fifantohan'ny fifampiraharahana mahazatra dia latsaka ambanin'ny marika 110,000 yuan / taonina.
Ao amin'ny tsenan'ny APT, ny famerenana ny famatsiana angovo sy ny fianjeran'ny vidin'ny akora manta sy fanampiny dia nitarika ny fihenan'ny fepetra fanohanana ny vidin'ny vokatra. Fanampin'izany, nihoatra ny nantenain'ny indostria ny fihenan'ny vidin'ny baiko maharitra ataon'ny orinasa lehibe. milamina. Ny tsena any ivelany dia nisy fiantraikany tamin'ny atmosfera ratsy tao an-toerana, ary nihena ny fikasana hividy. Ny fanontaniana ilaina fotsiny dia nampidina ny vidiny amin'ny lafiny iray. Mbola malina hatrany ny mpanamboatra ao an-toerana amin’ny fandraisana kaomandy amin’ny fijerena ny vidin’entana sy ny fanerena renivola.
Ao amin'ny tsenan'ny vovoka tungstène, ny fampisehoana ambony sy ambany amin'ny rojo indostrialy dia tsara sy ratsy. Ny atmosfera ara-barotra amin'ny ankapobeny dia ankapobeny. Ny fividianana sy fivarotana dia mitandrina ary mifototra amin'ny fangatahana. Ny tsena dia malemy sy miorina. . Ny fiantraikan'ny boom tungstène cube vao haingana teo amin'ny fangatahan'ny indostria sy ny toetry ny tsena dia very maina. Ny fifantohan'ny indostria dia ny fanarenana ara-toekarena ny indostrian'ny famokarana, ny valan'aretina ary ny lozika.
Solid Carbide End Mills, Fitaovana karbida, Carbide Precision Tools, Milling Cutter, Carbide Tools, Carbide simenitra,